သင့်သက်တမ်းကို ၁၂ နှစ်ပေါင်းပေးမယ့် အလေ့အကျင့် ၇ ခု – Gentleman Magazine
တကယ်လို့သင်ဟာ သင့်ရဲ့ ဘဝအမူအကျင့်အချို့ကို ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ရင် သင့်သက်တမ်းကို ၁၂ နှစ် အလွယ်တကူ ပေါင်းထည့်ပေးနိုင်မှာပါ။ အသက်ရှည်တဲ့ လူတွေရဲ့ အမူအကျင့်အတိုင်း လိုက်နေရုံနဲ့ သင့်သက်တမ်းက တိုးလာမှာပါ။ ၁၂ နှစ်အတိအကျကြီးတော့ ပေါင်းသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါက သင့်ရဲ့ မျိုးရိုးဗီဇ ပါတ်ဝန်းကျင်တို့နဲ့လဲ သက်ဆိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အသက်ပိုရှည်လာမှာကတော့ အမှန်အကန်ပါပဲ။ အသက်ပိုရှည်စေမယ့် အမူအကျင့် ၇ ခုကို အောက်မှာ ရေးပြထားပါတယ်။
၁. ပြုပြင်ထားတဲ့အသားကို မစားပါနဲ့ (+၄ နှစ်)
ပြုပြင်ထားတဲ့အသားဆိုတာ ပီဇာတို့ ဘာဂါတို့ ကြက်ကြော်တို့မှာ ပါတဲ့အသားလို အကြာကြီးနှပ်ထားတဲ့ အသားမျိုးပါ။ အဲဒိလို အသားမျိုးတွေကို လုံးဝမစားရင် သင့်အသက် လေးနှစ်ပိုရှည်မှာပါ။ အဲဒိအသားမျိုး တစ်နေ့ကို ၂၀ ဂရမ်ထက် ပိုစားခြင်းကြောင့် ဥရောပမှာ လူအယောက် ၄၅၀ ၀၀၀ အသေစောခဲ့ရတယ်လို့ လေ့လာမှုတစ်ခုက တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို ၇၂ ရာနှုန်း မြင့်တက်စေပြီး ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုကို ၁၁ ရာနှုန်း ပိုမြင့်မားစေပါတယ်။
၂. ထုံးဓာတ် လုံလုံလောက်လောက် စားပါ (+၀.၅ နှစ်)
ထုံးဓာတ် မလုံလောက်ခြင်းဟာ အရိုးပွရောဂါကို ဖြစ်ပွားစေပါတယ်။ အဲဒိရောဂါဟာ အသက်ကြီးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အသက်ငါးဆယ်ကျော် အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ထက်ဝက်ဟာ အရိုးတစ်ချောင်းတော့ အနည်းဆုံး ကျိုးဖူးကြပါတယ်။ ထုံးဓာတ်ကို နို့အပြင် နို့ထွက်ပစ္စည်း ဒိန်ခဲတွေနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကနေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
၃. နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ (+၅ နှစ်)
ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်အောင် စားသောက်နေရုံနဲ့ မပြီးသေးပါဘူး။ တစ်ပါတ်ကို ၆ ရက် ၇ရက် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဟာ သင့်အသက်ကို ၅ နှစ် ထပ်ပေါင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ တစ်ပါတ်ကို ၆ နာရီလောက် လှုပ်လှုပ်ရှားရှား နေပေးသင့်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းရဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေက အဆုံးမဲ့ပါ။ နှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို လျော့ကျစေတာ၊ ဆီးချိုလျော့ကျစေတာ၊ ကိုယ်နဲ့စိတ်ကို ကြည်လင်လန်းဆန်းစေတာတို့အပြင် တခြားကောင်းကျိုးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ငယ်ရွယ်တုန်း လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာဟာ အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားနေနိုင်ဖို့ အထောက်အကူပြုပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ နောက်ကျတယ် မရှိပါဘူး။ ခုပဲ စလုပ်လိုက်ပါတော့။
၄. ဆရာဝန်ဆီ အချိန်မှန် သွားရောက်ခြင်း (+၀.၅ နှစ်)
မိသားစုထဲမှာ ဆီးချို သွေးချို နှလုံးရောဂါ ရာဇဝင် ရှိသူတွေအနေနဲ့ အမြဲ အချိန်မှန် သွေးစစ်ဆီးစစ် နေသင့်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ဆီ အချိန်မှန် သွားရောက် ဆေးစစ်တာဟာ ရောဂါတွေ ရင့်မလာခင်မှာ ရှာတွေ့စေပြီး စောစောစီးစီး ကုသနိုင်ပါတယ်။ အရမ်းကြီး အပါတ်တိုင်းလိုလိုသွားနေဖို့လဲ မလိုပါဘူး။ မလိုအပ်ပဲ ဆေးစစ်ခြင်းဟာ အကျိုးထက် အပြစ် ပိုများပါတယ်။
၅. မိသားစု သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အချိန်ပိုဖြုန်းပါ (+၀.၅ နှစ်)
အချိန်မှန်ဆေးစစ်တာနဲ့ အစားအသောက်ပုံစံတွေဟာ ကျန်းမာရေးကို အဓိကအကျိုးသက်ရောက်တယ်ဆိုပေမယ့်လည်း ရေရှည်အတွက်ဆိုရင် သူငယ်ချင်းတွေ မိသားစုတွေကို မေ့ထားလို့မရပါဘူး။ မိတ်ဆွေကောင်းတွေနဲ့ မိသားစုဝင်တွေဟာ အခက်အခဲရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာ ကူညီဖြတ်ကျော်ပေးကြပြီး စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့နည်းစေပါတယ်။ ပါတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းကောင်းရှိတဲ့သူဟာ မရှိတဲ့သူထက် ၅၀ ရာနှုန်း အသက်ပိုရှည်စေပါတယ်
၆. ခရမ်းလွန်ရောင်ချည်တွေနဲ့ ထိတွေ့မှု ရှောင်ပါ (+၀.၅ နှစ်)
သင် အသားညိုနေလို့ နေလောင်မှုဒါဏ် ခံနိုင်တယ်မထင်ပါနဲ့။ အသားညိုသူတွေလဲ နေလောင် ခံရနိုင်ပါတယ်။ နေလောင်ခံမှု အရမ်းများရင် အရေပြားကင်ဆာ ဖြစ်စေနိုင်ပြီး သင့်သက်တမ်းကို လျော့စေနိုင်ပါတယ်။ အရိပ်ထဲမှာနေပါ။ နေပူထဲထွက်ရင် အင်္ကျီရှည်ဝတ်ပါ။ Sunscreen လိမ်းပါ။ မွေးကင်းစအရွယ်မှာ နေလောင်ခံမှု များခြင်းဟာ ကလေးသေဆုံးမှုကို အများကြီး မြင့်တက်လာစေပါတယ်။
၇. သွားပွတ်ကြိုး နေ့စဉ် အသုံးပြုပါ (+၁ နှစ်)
သွားနေ့တိုင်းတိုက်ရုံနဲ့ မရပါဘူး။ သွားပွတ်ကြိုး နေ့စဉ်သုံးတာဟာ သွားဖုံးရောင်ရောဂါ၊ ရေစီးကမ်းပြိုရောဂါ၊ သွားကျွတ်ထွက်တာတို့ကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ သွားနဲ့ သွားဖုံးရောဂါတွေဟာ တခြားကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းတွေကိုပါ ထိခိုက်စေဖို့ အခွင့်အလမ်းများပါတယ်။ ဥပမာ ကျောက်ကပ်ရောဂါတွေနဲ့ ဆီးချိုပါ။
သင် တတ်နိုင်ရင်တော့ ကော်ဖီ လက်ဖက်ရည်တို့လို ကဖင်းဓာတ်ပါတဲ့ဟာ လုံးဝမသောက်တာဟာ သင့်အသက်ကို နှစ်ဝက် တိုးပေးနိုင်ပါသေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကော်ဖီ လက်ဖက်ရည်ကို တစ်နေ့ သုံးခွက်လောက်သောက်တာဟာ မသောက်တဲ့သူတွေထက် ၁၀ ရာနှုန်း အသက်ပိုရှည်ပါတယ်ဆိုတဲ့ တွေ့ရှိချက်တွေလဲ ရှိနေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အဲဒိအချက်ကို ချန်ထားခဲ့ပါမယ်။ ကော်ဖီဖြတ်မလားဆိုတာကိုတော့ သင့်ဘာသာ စဉ်းစားပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ သောက်မှာပါ။
တကယျလို့သငျဟာ သငျ့ရဲ့ ဘဝအမူအကငျြ့အခြို့ကို ပွောငျးလဲပဈနိုငျရငျ သငျ့သကျတမျးကို ၁၂ နှဈ အလှယျတကူ ပေါငျးထညျ့ပေးနိုငျမှာပါ။ အသကျရှညျတဲ့ လူတှရေဲ့ အမူအကငျြ့အတိုငျး လိုကျနရေုံနဲ့ သငျ့သကျတမျးက တိုးလာမှာပါ။ ၁၂ နှဈအတိအကကြွီးတော့ ပေါငျးသှားမှာမဟုတျပါဘူး။ အဲဒါက သငျ့ရဲ့ မြိုးရိုးဗီဇ ပါတျဝနျးကငျြတို့နဲ့လဲ သကျဆိုငျပါသေးတယျ။ ဒါပမေယျ့ အသကျပိုရှညျလာမှာကတော့ အမှနျအကနျပါပဲ။ အသကျပိုရှညျစမေယျ့ အမူအကငျြ့ ၇ ခုကို အောကျမှာ ရေးပွထားပါတယျ။
၁. ပွုပွငျထားတဲ့အသားကို မစားပါနဲ့ (+၄ နှဈ)
ပွုပွငျထားတဲ့အသားဆိုတာ ပီဇာတို့ ဘာဂါတို့ ကွကျကွျောတို့မှာ ပါတဲ့အသားလို အကွာကွီးနှပျထားတဲ့ အသားမြိုးပါ။ အဲဒိလို အသားမြိုးတှကေို လုံးဝမစားရငျ သငျ့အသကျ လေးနှဈပိုရှညျမှာပါ။ အဲဒိအသားမြိုး တဈနကေို့ ၂၀ ဂရမျထကျ ပိုစားခွငျးကွောငျ့ ဥရောပမှာ လူအယောကျ ၄၅၀ ၀၀၀ အသစေောခဲ့ရတယျလို့ လလေ့ာမှုတဈခုက တှရှေိ့ခဲ့ပါတယျ။ နှလုံးရောဂါဖွဈပှားမှုကို ၇၂ ရာနှုနျး မွငျ့တကျစပွေီး ကငျဆာဖွဈပှားမှုကို ၁၁ ရာနှုနျး ပိုမွငျ့မားစပေါတယျ။
၂. ထုံးဓာတျ လုံလုံလောကျလောကျ စားပါ (+၀.၅ နှဈ)
ထုံးဓာတျ မလုံလောကျခွငျးဟာ အရိုးပှရောဂါကို ဖွဈပှားစပေါတယျ။ အဲဒိရောဂါဟာ အသကျကွီးတဲ့ အမြိုးသမီးတှမှော ပိုဖွဈတတျပါတယျ။ အသကျငါးဆယျကြျော အမြိုးသမီးတှရေဲ့ ထကျဝကျဟာ အရိုးတဈခြောငျးတော့ အနညျးဆုံး ကြိုးဖူးကွပါတယျ။ ထုံးဓာတျကို နို့အပွငျ နို့ထှကျပစ်စညျး ဒိနျခဲတှနေဲ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှကေနေ ရရှိနိုငျပါတယျ။
၃. နစေ့ဉျလကေ့ငျြ့ခနျးလုပျပါ (+၅ နှဈ)
ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျအောငျ စားသောကျနရေုံနဲ့ မပွီးသေးပါဘူး။ တဈပါတျကို ၆ ရကျ ၇ရကျ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျခွငျးဟာ သငျ့အသကျကို ၅ နှဈ ထပျပေါငျးပေးနိုငျပါတယျ။ တဈပါတျကို ၆ နာရီလောကျ လှုပျလှုပျရှားရှား နပေေးသငျ့ပါတယျ။ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျခွငျးရဲ့ ကနျြးမာရေးအကြိုးကြေးဇူးတှကေ အဆုံးမဲ့ပါ။ နှလုံးရောဂါဖွဈပှားမှုကို လြော့ကစြတော၊ ဆီးခြိုလြော့ကစြတော၊ ကိုယျနဲ့စိတျကို ကွညျလငျလနျးဆနျးစတောတို့အပွငျ တခွားကောငျးကြိုးတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။ ငယျရှယျတုနျး လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျတာဟာ အသကျကွီးလာတဲ့အခါ ကိုယျလကျလှုပျရှားနနေိုငျဖို့ အထောကျအကူပွုပါတယျ။ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျဖို့ နောကျကတြယျ မရှိပါဘူး။ ခုပဲ စလုပျလိုကျပါတော့။
၄. ဆရာဝနျဆီ အခြိနျမှနျ သှားရောကျခွငျး (+၀.၅ နှဈ)
မိသားစုထဲမှာ ဆီးခြို သှေးခြို နှလုံးရောဂါ ရာဇဝငျ ရှိသူတှအေနနေဲ့ အမွဲ အခြိနျမှနျ သှေးစဈဆီးစဈ နသေငျ့ပါတယျ။ ဆရာဝနျဆီ အခြိနျမှနျ သှားရောကျ ဆေးစဈတာဟာ ရောဂါတှေ ရငျ့မလာခငျမှာ ရှာတှစေ့ပွေီး စောစောစီးစီး ကုသနိုငျပါတယျ။ အရမျးကွီး အပါတျတိုငျးလိုလိုသှားနဖေို့လဲ မလိုပါဘူး။ မလိုအပျပဲ ဆေးစဈခွငျးဟာ အကြိုးထကျ အပွဈ ပိုမြားပါတယျ။
၅. မိသားစု သူငယျခငျြးတှနေဲ့ အခြိနျပိုဖွုနျးပါ (+၀.၅ နှဈ)
အခြိနျမှနျဆေးစဈတာနဲ့ အစားအသောကျပုံစံတှဟော ကနျြးမာရေးကို အဓိကအကြိုးသကျရောကျတယျဆိုပမေယျ့လညျး ရရှေညျအတှကျဆိုရငျ သူငယျခငျြးတှေ မိသားစုတှကေို မထေ့ားလို့မရပါဘူး။ မိတျဆှကေောငျးတှနေဲ့ မိသားစုဝငျတှဟော အခကျအခဲရငျဆိုငျနရေခြိနျမှာ ကူညီဖွတျကြျောပေးကွပွီး စိတျဖိစီးမှုကို လြော့နညျးစပေါတယျ။ ပါတျဝနျးကငျြအသိုငျးအဝိုငျးကောငျးရှိတဲ့သူဟာ မရှိတဲ့သူထကျ ၅၀ ရာနှုနျး အသကျပိုရှညျစပေါတယျ
၆. ခရမျးလှနျရောငျခညျြတှနေဲ့ ထိတှမှေု့ ရှောငျပါ (+၀.၅ နှဈ)
သငျ အသားညိုနလေို့ နလေောငျမှုဒါဏျ ခံနိုငျတယျမထငျပါနဲ့။ အသားညိုသူတှလေဲ နလေောငျ ခံရနိုငျပါတယျ။ နလေောငျခံမှု အရမျးမြားရငျ အရပွေားကငျဆာ ဖွဈစနေိုငျပွီး သငျ့သကျတမျးကို လြော့စနေိုငျပါတယျ။ အရိပျထဲမှာနပေါ။ နပေူထဲထှကျရငျ အင်ျကြီရှညျဝတျပါ။ Sunscreen လိမျးပါ။ မှေးကငျးစအရှယျမှာ နလေောငျခံမှု မြားခွငျးဟာ ကလေးသဆေုံးမှုကို အမြားကွီး မွငျ့တကျလာစပေါတယျ။
၇. သှားပှတျကွိုး နစေ့ဉျ အသုံးပွုပါ (+၁ နှဈ)
သှားနတေို့ငျးတိုကျရုံနဲ့ မရပါဘူး။ သှားပှတျကွိုး နစေ့ဉျသုံးတာဟာ သှားဖုံးရောငျရောဂါ၊ ရစေီးကမျးပွိုရောဂါ၊ သှားကြှတျထှကျတာတို့ကို ကာကှယျပေးပါတယျ။ သှားနဲ့ သှားဖုံးရောဂါတှဟော တခွားကိုယျအင်ျဂါ အစိတျအပိုငျးတှကေိုပါ ထိခိုကျစဖေို့ အခှငျ့အလမျးမြားပါတယျ။ ဥပမာ ကြောကျကပျရောဂါတှနေဲ့ ဆီးခြိုပါ။
သငျ တတျနိုငျရငျတော့ ကျောဖီ လကျဖကျရညျတို့လို ကဖငျးဓာတျပါတဲ့ဟာ လုံးဝမသောကျတာဟာ သငျ့အသကျကို နှဈဝကျ တိုးပေးနိုငျပါသေးတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကျောဖီ လကျဖကျရညျကို တဈနေ့ သုံးခှကျလောကျသောကျတာဟာ မသောကျတဲ့သူတှထေကျ ၁၀ ရာနှုနျး အသကျပိုရှညျပါတယျဆိုတဲ့ တှရှေိ့ခကျြတှလေဲ ရှိနပေါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ အဲဒိအခကျြကို ခနျြထားခဲ့ပါမယျ။ ကျောဖီဖွတျမလားဆိုတာကိုတော့ သငျ့ဘာသာ စဉျးစားပါ။ ကြှနျတျောကတော့ သောကျမှာပါ။
Previous: တစ်ကိုယ်ရည်စိတ်ဖြေခြင်းနှင့် ၀က်ခြံ ဆက်စပ်မှု
Next: စကားပြောကောင်းသူဖြစ်ဖို့ နည်းလမ်း